ဗေဒင် – Page2– Myanmar Live
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၁၀-၁၆ ရက်ထိ
August 10, 2020 August 10, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်ကိစ္စတွေကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရမယ်။ အလုပ်အခွင့်အလမ်းတွေနည်းလာသော်လည်း ဝင်ငွေအတည်တစ်ကျရှိခြင်းကြောင့် ကြွေးမြီများကင်းရှင်းမယ် အချစ်ရေးမှာအသေးအမွှားကိစ္စများကြောင့် မကြာခဏစကားများရမယ် ဆိုးရွားပါကအိမ်ထောင်ကွဲကိန်းရှိတယ်။ ယတြာ …
August 3, 2020 August 3, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပေါများမယ် လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာတည်မြဲမယ် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလုပ်တွေ အတက်အကျဖြစ်နေတာကြောင့် အချို့သောအခါမျိုးမှာပင်ပန်းရမယ် ငွေကြေးအလားအလာကောင်းမယ်၊ ငွေဝင်လမ်း ပေါများမယ် စုဆောင်းပါ …
July 24, 2020 July 24, 2020 - by peeraporn y.
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၂၀-၂၆ ရက်ထိ
July 20, 2020 July 20, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ငြိမ်သက်နေလိမ့်မယ်။ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမညီမျှတာကြောင့် စိတ်သောကရောက်ရမယ်။ အိမ်ထောင်သည်များရဲ့အချစ်ရေးသာယာဖြောင့်ဖြူးမယ် လူလွတ်များ ဆက်လက်အထီးကျန်ရဦးမယ်။ ယတြာ အလှုခံပုံးများတွင်ငွေသားလှုဒါန်းပါ …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၁၃-၁၉ ရက်ထိ
July 13, 2020 July 13, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်မိတ်ဆွေများ၏ ဖေးမမှုကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပြဿနာ များကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ အိမ်ထောင်သည်များ နှစ်ဦးစပ်တူလုပ်သည့်လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မယ်။ ငွေဝင်လမ်းပေါများမယ် လူလွတ်များဆန်းပွင့်မယ်။ ယတြာ …
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲတိုးတတ်ကိန်းရှိတယ် သို့ပေမယ့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်လည်ခံရနိုင်တာကြောင့် အလုပ်အပေါ်မှာ အားရုံစူးစိုက်မှုရှိဖို့လိုမယ်။ အိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် မိသားစုနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်တိုးတက်မယ် လူလွတ်များခရီးထွက်ခြင်းက …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၂၉ – ဇူလိုင်လ ၅ ရက်ထိ
June 29, 2020 June 29, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်ကိစ္စများကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စွာလုပ်ကိုင်ရမယ်။ အလုပ်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရမယ် ထွက်ငွေများပြီး ဝင်ငွေနည်းမယ် သို့ပေမယ့်လည်း ငွေအစုအလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်ကိန်းရှိတယ် ချစ်သူရည်းစားများ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၂၂-၂၈ ရက်ထိ
June 22, 2020 June 22, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အကြီးအကဲများမှယုံကြည်အားထားမှုရရှိလိမ့်မယ် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ကို ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ကိုင် သွားပါကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖြင့်ကြုံကြိုက်ရမယ် ဝင်ငွေအတည်တစ်ကျရှိမယ် မိသားစုကိစ္စများကြောင့် ငွေကုန်ကြေးကျများမယ်။ အချစ်ရေးကံကောင်းမယ်။ …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁၅-၂၁ ရက်ထိ
June 15, 2020 June 15, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များရဲ့တစ်ယူသန်စိတ်ကြောင့် ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရမယ် ဝင်ငွေအတည်တစ်ကျ ရှိမယ် သို့သော်ငွေကိုမသုံးဆွဲခင်ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲထားပါ။ ချစ်သူရည်းစားများ စိတ်ချင်းမတူတာကြောင့် စကားများရန်ဖြစ် …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၈-၁၄ ရက်ထိ
June 8, 2020 June 8, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီး ခန့်မှန်းရခက်သောအခြေအနေများကြောင့် အချို့သောကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရာခက်ခဲရလိမ့်မယ် ဝင်ငွေအတည်တစ်ကျရှိသော်လည်းမစုမဆောင်းမိဖြစ်မယ် အချစ်ရေးအတားအဆီးများ ရှိတာကြောင့် အထီးကျန်ရဦးမယ်။ ယတြာ …